Qeybta:General10 min akhris
Waqtiyada isku dayga ayaa awood u leh inay na isku keenaan ama nagu kala geeyaan. Iyada oo ay jirto masiibada socota, kala qaybsanaan qoto dheer oo siyaasadeed iyo bulsho, iyo dhacdooyinka cimilada xun, 2021 waxay ahayd sanad kale oo murugo iyo murugo leh.
Haddana, waxa ay ahayd markii qaar badan ay isu soo jiideen ujeeddo, hufnaan iyo rajo soo cusboonaatay. McKnight, waxaanu soo dhawaynay hoggaan cusub oo aanu dardargelinay fikrado waaweyn oo ficil ah - gelinta awoodda dadka ee xarunta dimuqraadiyadda, beeralayda ee xarunta cilmi-baarista beeraha caalamiga ah, iyo Midwest ee xarunta xalalka cimilada caalamiga ah. Anagoo kaashanayna la-hawlgalayaasheena, waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u bogsiin lahayn waxa ku jabay nidaamyada aan qof walba si siman ugu adeegin — dib-u-dhiska xaafadaha, ganacsiyada yar-yar, iyo ururrada ay saameeyeen Covid iyo kacdoonka shacabka ee Magaalooyinkeena Mataanaha ah.
Markaan dib u jaleecno 2021, waxaan u dabaaldegeynaa qabanqaabiyeyaasha bulshada iyo milkiilayaasha ganacsiga, saynisyahannada cimilada iyo dhisayaasha dhaqdhaqaaqa, farshaxannada iyo dhaqan-yaqaannada, cilmi-baarayaasha iyo beeralayda, iyo saynisyahannada neerfaha ee noo soo dhawaada maalinta ay dadka iyo meeradu ku barwaaqoobi karaan. .
Aasaas gaar ah ahaan, waxaan muddo dheer aqoonsannay inaan ku abuuri karno saameyn doorar badan oo ay ka mid yihiin—oo aad uga sii dheer—deeq bixinta. Tan iyo markii ugu horeysay ee McKnight uu soo bandhigay dadweynaha kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo bayaanka ka mid noqoshada, waanu ka faa’iidaysanay dhammaan doorarkayada-maalgeliyaha, hoggaamiyaha fikirka, loo-shaqeeyaha, hay'ad dhaqaale, iyo maal-galiyaha hay'adaha-si aan ugu janjeerno xagga sinnaanta. Saddexdii sano ee la soo dhaafay, waxaanu bedelnay siyaasadeena, barnaamijyadeena, iyo hogaaminta, iyo sida aan lacagta u dhaqaajino, u isticmaalno codkeena, u samayno deeqaha, kuwa kale isugu yeedhno, oo aan ula shaqayno waratada. Waxaan rajeyneynaa in anaga oo wadaaga horumarkayaga mid weyn iyo mid yar, aan ku dhiirigelino maalgeliyayaasha kale inay sidaas oo kale sameeyaan. Akhriso our Sinnaanta Waxqabadka warbixin si aad wax badan uga ogaato.
Tonya Allen (xarunta jaakada madow) waxay la kulantaa hogaamiyayaasha maxaliga ah ee aan macaash doonka ahayn ee Saint Cloud. Xuquuqda sawirka: Paul Middlestaedt
Tonya Allen waxa uu u bilaabmaya madaxweynaha cusub ee McKnight
Maarso 2021, Tonya Allen Wuxuu ku biiray McKnight isagoo madaxweyne ah iyadoo kooxdu ay sii wadeen shaqada fogaanta sababtoo ah masiibada iyo dadka reer Minnesota waxay sii wadeen xisaabinta dilkii George Floyd iyadoo kiiskii ka dhanka ahaa Derek Chauvin uu socday maxkamad. In a qoraal shakhsi ah, waxay la wadaagtay in uu ahaa Mr. Floyd-iyo dhaqdhaqaaqa cadaaladda jinsiyadeed ee caalamiga ah ee uu dhiirigeliyay - kuwaas oo ku dhiirigeliyay inay u guurto shaqo cusub, gobol cusub, hawl cusub.
Tan iyo markii ay timid, waxay si cad u sheegtay in xilligan la joogo waqtigii geesinimada iyo geesinimada, Minnesotana ay haysato fursad gaar ah oo ay caalamka ugu muujin karto sida isbeddelku halkan uga dhici karo.
"Dhammaanteen waxaan awood u leenahay inaan isticmaalno awoodeena shakhsi ahaaneed, awoodeena hay'addeena, iyo awoodayada wadajirka ah si aan dib ugu qorno xeerarka." —TONYA ALLEN, MADAXWEYNE
Wareysiyo is daba joog ah oo warbaahin ah iyo wadahadalo aan toos ahayn oo lala yeeshay reer Minnesota, Allen waxa ay si furan ula wadaagtay wax badan oo ku saabsan taariikhdeeda, aragtideeda, iyo habkeeda ku aaddan wax-ka-beddelka samafalka. Wax badan ka baro adiga oo dhegayso muuqaalkeeda Minneapolis Foundation's Wadahadalka Chanda podcast iyo tan C-Speak Minnesota wareysi.
Himilada iyo Tilmaamaha Fanka & Dhaqanka Cusub
Sida hormuudka maalgeliyayaasha fanka ee Minnesota, taageerada fannaaniinta shaqeeya waxay had iyo jeer ahayd tiir-dhexaadka barnaamijka Fanka ee McKnight. Faafida Covid-19 waxa ay xoojisay kala duwanaanshaha maalgelineed ee baahsan ee ka dhex jira waaxda fanka iyo dhaqanka, fanaaniintuna waxay muujiyeen sida ay ugu baahan yihiin noocyo kala duwan oo qaab-dhismeedka taageerada si loo abuuro loona horumariyo.
2021, McKnight si ula kac ah habkeenii bedeshay maalgelinta fanka, oo leh hadaf cusub kicin hal-abuurka, awoodda, iyo hoggaaminta fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo dhaqammada sita. Markaan sidaa samaynay, waxaanu sii xoojinay taageeradayada Black, Asaliga ah, Aasiyaan, Latinx, iyo fanaaniinta kale ee aan matalayn iyo machadyada dhaqanka ee Minnesota, iyo fanaaniinta iyo dhaqan-dhaqameedyada ka shaqeeya horumarinta caddaaladda.
"Fannaaniinta iyo dhaqan-qaadayaashu waa aragti-yahanno, iftiin-arag, bini-aadminimo dhisayaal... hawl-wadeenno, qabanqaabiyeyaasha, iyo kuwa isbeddel-sameeya." -DEANNA CUMINGS, FANKA & AGAASIMAHA BARNAAMIJKA DHAQANKA
Hindisaha gobolka $12.6 milyan ee Qasnadaha Dhaqanka Mareykanka waxay siisay maalgalin cusub oo loogu talagalay Black, Asaliga, Latinx, iyo ururada fanka ee Aasiya Ameerika hogaamiyo si looga jawaabo Covid. Wajigii kowaad ee maalgelinta, barnaamijku wuxuu sharfay hay'adaha saamaynta weyn ku yeeshay muuqaal-dhaqameedkeena muddo tobanaan sano ah, inkastoo maalgashi hoosaadyo taariikhi ah. Iyadoo horay loo eegayo, barnaamijka Kaydka Dhaqanka ee Seeding ayaa abaal-marin siin doona deeqo lagu kobcinayo mustaqbalka fanaaniinta Madowga, Asaliga ah, Latinx, iyo Aasiyaanka Ameerikaanka ah ee fannaaniinta iyo ururada dhaqameed ee Minnesota, North Dakota, South Dakota, iyo 23 Qaranka Dhaladka ah ee wadaaga juqraafiga isku mid ah. Dadaalkan waxaa taageeray McKnight, Ford, Bush, iyo Jerome Foundations.
Abuuritaanka Minnesota George Floyd U Qalmay
Sida dadka aan u adeegno, McKnight wuxuu ka kooban yahay dad ku nool oo ka shaqeeya bulshadan. Kooxdayadu shakhsi ahaan waxay la kulmeen murugada iyo walbahaarka dilkii George Floyd iyo kacdoonkii shacabka ee ka dhashay.
"Shaqadayadu maanta aad ayay uga muhimsan tahay sidii hore iyadoo aan wajaheyno dhibaato caafimaad, dhibaato dhaqaale, iyo dhibaato bulsheed - iyo cunsuriyad nidaamsan ayaa udub dhexaad u ah mid kasta." —HUKUN DABAR, AGAASIMAHA FULINTA URURKA HORUMARINTA AFRO AMERICA.
Si xushmad leh oo loogu talagalay sannad-guuradii dhimashada George Floyd, ayaa Mu'asasada la guddoonsiiyay Deeqaha Xusuusta George Floyd$100,000 deeqo aan la rabin oo la siiyo 10 hay'adood oo ay Madow hogaaminayaan kuwaaso Minnesota ka dhigaya meel soo dhawayn badan, taageero ah, oo loo dhan yahay. Deeqahan hal mar ah, ee ku salaysan kalsoonida waxay aqoonsadaan kooxaha ka baxsan deeq-bixiyayaashayada hadda waxayna xaqiijiyaan shaqada ay ka qabanayaan bogsiinta iyo cadaalada habaysan.
Akhriso ku saabsan dadka deeqda qaata iyo kooxdayada milicsiga shakhsi ahaaneed. .
Ku-Xidhaynta Beeralayda ee Xalka Cunnada Adduunka
Marka la eego wacyiga caalamiga ah ee ku saabsan sida nidaamyada cuntada warshaduhu ay uga qayb qaadan karaan dhibaatooyinka bini'aadamka iyo meeraha labadaba, McKnight waxay xoojisay dadaalkeeda cilmi-baarista agroecological-iyagoo og inaan u baahanahay noocyo kala duwan oo aqoon ah oo maxalli ah si loo helo xalalka cuntada iyo cimilada.
Afrika iyo Koonfurta Ameerika, Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada waxay isu keentaa beeralayda, cilmi-baarayaasha, iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn si loo hagaajiyo hababka cuntada iyo hab-nololeedyada beeralayda saamilayda yar yar. Hal dariiqo oo taas lagu sameeyo ayaa ah iyada oo loo marayo shabakadaha cilmi -baarista beeralayda-Kooxaha sameeya cilmi-baarista agroecology iyo horumarinta dhaqamada ixtiraamaya xikmadaha maxalliga ah oo sameeya dariiqa dib loogu noqonayo cuntada nafaqada leh ee kobcisa dadka iyo meeraha. Laga soo bilaabo 2013, McKnight waxa uu taageeray 30 shabakadood oo cilmi baaris beeralay ah oo u dhexeeya cabbirka 15 ilaa in ka badan 2,000 beeralay ah. Shabakadahan ayaa qayb ka ah nidaamka loo siman yahay oo beeralayda iyo beeralayda siinaya cod. Akhriso Waa maxay sababta aan u maalgashanayno inaan u beddelno Nidaamyada Cuntada Adduunka si aad waxbadan uga barato.
"Shabakadaha cilmi-baarista beeralayda ayaa na tusaya in beeraha, nidaamyada cuntada, sinnaanta, iyo meeraheenna ay si adag isugu xiran yihiin." —JANE MALAND CADY, DIRECT BARNAAMIJKA DALKA
Oktoobar 2021, McKnight wuxuu ku dhawaaqay go'aan lagu gaarayo eber saafiga ah ee gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo guud ahaan $3 bilyan oo deeq ah 2050 ugu dambeyntii. Maalgeliyaha hormuudka ah ee xalalka cimilada guud ahaan Midwest, McKnight wuxuu noqday aasaaska gaarka ah ee ugu weyn dalka si uu u daba galo deeq eber saafi ah, iyo kaliya aasaaska labaad ee Mareykanka si uu sidaas u sameeyo. Ballanqaadkani waa dariiqa aanu ku dardargelinayno himiladeena iyo saamayntayada iyada oo loo marayo caasimadeena, iyo habka aan u isticmaalno hogaaminteena si aan ugu dhiirigelino kuwa kale in ay ku daydaan.
eber saafiga ah waa istaraatijiyad dhamaystiran oo isla markaaba loo dhimo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dhamaan faylalka maalgashiga - oo ay ku jiraan qaybta shidaalka -iyado samaynta maalgashi cusub si loo dhiso dhaqaale aan kaarboonka lahayn. Wax badan ka baro adiga oo akhriya kan Eber Net FAQ iyo kan maqaalka Forbes.
"Dollar kasta oo deeq ah waxay bixisaa fursado degdeg ah oo awood leh si ay u horumariyaan mustaqbalka kaarboon-yar." —ELIZABETH MCGEVERAN, AGAASIMAHA MAALGASHIGA
Maxay Mid-galbeed ugu baahan tahay inay ku hoggaamiso Cimilada
Dhulka wadnaha ee Ameerika ayaa ah ku dhawaad saddex meelood meel meel ka mid ah qiiqa hawada lagu sii daayo ee dalka, waana ka shanaad ee ugu weyn hawada sare ee Kaarboonka adduunka. Kala duwanaanshiyahan shakiga leh ayaa ku kalifay Midwest in ay si degan u qaabeeyaan hogaaminta cimilada iyo hal-abuurnimada-taasoo keentay horumarro waaweyn.
Midwest qaranka u horseeda Soo saarista tamarta dabaysha, waxaanan ku jirnaa safka hore ee cadceedda bulshada — kaxaynta dhimista sare ee qiiqa iyo kordhinta helitaanka tamar nadiif ah. Waxaan hal-abuuraynaynaa sida aan dalka u quudinno, anagoo ku shaqaynayna beero waara oo hawada ka saara kaarboonka. Waxaan dhignay in ka badan 677,000 Reer-galbeedka in ay ka shaqeeyaan shaqooyin mushahar fiican leh soo saarista iyo rakibidda qaybaha tamarta la cusboonaysiin karo, baabuurta, baytariyada, iyo tignoolajiyada hufan si ay u xoojiyaan dhaqaalaha berrito.
"Dunidu waxay u baahan tahay Maraykanka si ay u gaarto yoolkeeda cimilada, Maraykankuna wuxuu u baahan yahay Midwest-waa mid sahlan." —TONYA ALLN, MADAXWEYNE IYO SARAX CRISTIANSEN, AGAASIMAHA BARNAAMIJKA CIMILADA & TAMARTA DHEX-GALIGA.
Bishii Oktoobar, kooxda cimiladu waxay horseedeen Shir-madaxeedka Samafalka Cimilada ee Midwest Midwest si ay u wadaagaan casharadii ay barteen oo ay dhiirigeliyaan dareenka iyo taageerada gobolka. Intaa waxa dheer, waxaanu ku kordhinay baaqa ku saabsan maalgelinta hamiga leh ee federaalka, samafalayaasha, iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ee danta dalka iyo meeraheena. Newsweek.
Hal Sano oo Hal Sano ah oo Hal Sano ah u ah Barnaamijka Bulshooyinka Firfircoon iyo Sinaanta
McKnight wuxuu bilaabay barnaamij cusub oo firfircoon & Bulsho Sinaan ah, oo u heellan sinaanta iyo ka mid noqoshada Minnesota, dhexdeeda cudurka faafa, wax yar ka dib kacdoonadii sokeeye ee George Floyd, iyo ka hor doorashadii Mareykanka iyo kacdoonkii Janaayo.
Sannadkan, barnaamijka bulshooyinka firfircoon ee loo siman yahay ayaa u dabaaldegay sannadkiisii ugu horreeyay ee deeq-bixinta. Ururada ku jira faylalka kala duwan ee la-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha Waxay ka shaqaynayaan sidii ay Minnesota hore ugu riixi lahaayeen mustaqbalka kaas oo qof walba-- juqraafiga, jinsiyadda, dhaqanka, iyo qaybaha-–kori kara. Baro wax badan oo ku saabsan waxay kooxdu ka baratay sannadkii ugu horeeyay ee this wareysi uu la yeeshay agaasimaha barnaamijka David Nicholson, iyo kan macluumaadka webinar.
"Barnaamijka Bulshooyinka Firfircoon ee loo siman yahay ayaa leh aragti cad oo mustaqbalka ah oo dhammaan reer Minnesota-Madow, caddaan iyo bunni; Dhaladka iyo dadka cusub; laga soo bilaabo dhinaca Waqooyi ilaa Xeebta Waqooyi - waxay wadaagaan awood, ka qaybqaadasho, iyo barwaaqo." —DAVID NICHOLSON, MUUQAALKA & BARNAAMIJKA BULSHADA AGAASIMAHA BULSHADA
U gudubka 2022 oo leh Geesinimo iyo Ujeedo
Sannadka 2021 ayaa ina tusay, xataa in ka badan, shaqada isbeddelka ah ee ay tahay inaan dhammaanteen samayno si aan u horumarinno caddaalad, hal abuur, iyo mustaqbal badan halkaas oo dadka iyo meeraha ay ku koraan sanadaha soo socda. Si wada jir ah bulshooyinkeena, waxaan dib u qori doonaa sharciyada nidaamyada duugoobay iyo kuwa waxyeelada leh, waxaan ka faa'iideysan doonaa hal mar fursadaha jiilka oo inta badan ka soo bixi kara dhibaatada, waxaanan garab istaagi doonaa kuwa ugu nugul. Waxaan sidoo kale sii wadi doonaa inaan dhisno buundooyinka-iyo is-aaminaadda-iyo qaybsanaanta nooc kasta.
Aan ku galno 2022 geesinimo, ujeedo, iyo rajo!